Barnaamijyada sameeya Muqaal Bilaashka ah ee Bilaashka ah (Software-ka Desktop, Barnaamijyada Mobilada, iyo Barxadaha Onlineka) | Martech Zone
Software slideshow gaare wanaagsan kuu ogolaanaya inaad si ay u horumariyaan bandhigyo cajiib ah ama videos qalab kala duwan customizable sida arrimo, dhawaaqa, saamaynta, qoraalka qaabeynta iyo qaababka, iwm Faylasha la soo saaray ayaa lagu keydiyaa qaabab kala duwan sida. MPEG, MOV, .AVI ama .MP4, iwm Marka si sahal ah ayaa looga heli karaa barnaamijyada kale sida Android, iOS ama computer. Bandhigyadan ayaa kaa caawin kara inaad ka dhigto munaasabado gaar ah sida dhalashada ama aroosyada lama iloobi karo, maadaama ay bixiyaan habka ugu wanaagsan ee lagu muujiyo hal-abuurkaaga. Waxaad si sahal ah uga heli kartaa internetka codsiyo badan oo aad ku abuureyso filim duubey oo maqaalkan, waxaan ku taxayaa 12 ka mid ah!
Qeybta 1: Top 4 Free Slideshow Maker Desktop Platform
Qalabka slideshow sameeyahiisa ugu fiican ee hoos ku taxan ayaa ah barnaamij la jaan qaada Windows iyo Mac. Nidaamyada lagu abuurayo slideshow leh sawirro ayaa aad isugu eg: ku dar sawirrada marka hore ka dibna ku dar maqal / muusig, u keydso DVD ama kombuyuutar ama kula wadaag warbaahinta bulshada.
Wondershare Filmora maahan kaliya tifaftire fiidiyow laakiin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad abuurto duubeyno, bilow iyo xirfadlayaalba. Waxaas oo dhan waxay si weyn u fududeeyaan fiidiyowga iyo hawlaha horumarinta slideshow ee Windows iyo Mac. Qalab abuuraya duubey muusig iyo kala guur, shaandhooyin, dusha sare, iwm.
Waxa ay taageertaa oo dhan qaabab file caan ah iyo slideshow ah waxaa si toos ah la wadaagi karaa dhufto ee warbaahinta bulshada sida YouTube, Vimeo, iwm
Tilmaamo badan ayaa ka dhigaya horumarka soo bandhigida mid wax ku ool ah.
Isdhexgal dareen leh qalab si fudud loo isticmaalo.
Filmora waxay leedahay maktabad maqal ah oo la dhisay oo bixisa qaabab muusiko oo kala duwan iyo saamaynta dhawaaqa
Waxay leedahay qaybo badan oo muusiko ah, miirayaal, walxo dhaqdhaqaaq, kala guur iyo isdabamarin.
Dhammaan qaabab file caan ah ayaa la taageeray.
Si fudud ugu soo dir warbaahinta bulshada.
2. Wondershare DVD Muqaal dhise
Wondershare DVD Muqaal dhise qalab wuxuu bixiyaa xal xoog leh si loo horumariyo muqaal muuqaal hodan ku ah baahiyaha xirfadeed. Isticmaalayaasha ayaa si fudud isugu dari kara fiidiyowyada iyo sawirrada oo ay weheliyaan 2D ama 3D saameyn ku-meel-gaadh ah. Fiidiyowga natiijada isla markiiba waxaa loola wadaagi karaa YouTube, iPod ama TV.
Aad ayey u fududahay in la isticmaalo qalabkan qaababka horay loo dejiyay.
Waxay bixisaa a collection badan oo image, video iyo qaabab maqal ah.
Tifatirka waxaa lagu fulin karaa warbaahinta kahor inta aan la adeegsan abuurka ugu dambeeya.
Uma oggolaanayso dadka isticmaala inay ku wadaagaan bandhigyada iimayl ama si toos ah CD-yada is-dhexgalka ah.
Filim Video Converter ah waa barnaamij ku habboon in lagu abuuro duubo deg deg ah. Waxay u abaabushaa fiidiyowga iyo sawir qaadista ugu fiican habka ugu cajiibka badan ee Windows PC. Haddii aad u baahan tahay inaad dhexgeliso sawirro badan oo sawirro ah barnaamijkaaga Muqaalka ah, Freemake ayaa ah doorashada kuugu fiican adiga.
Gabi ahaanba waa bilaash oo diiwaangelin looma baahna.
Noocyo badan oo faylal wax soo saar ah ayaa la taageerayaa.
Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si toos ah ugu soo dejiso mashruucaaga YouTube-ka.
Soo bandhigida waxaa toos loogu gudbin karaa DVD.
Ma jiraan sheybaar ama arrimo lagu bilaabi karo.
Waxaad isticmaali kartaa kaliya hal saameyn mana ku dari kartid qoraalka bogagga istish-haadka.
Microsoft ee Windows Movie Kan sameeyey Kuu ogolaanayaa inaad ku darto ururinta aad ugu jeceshahay muusikada, fiidiyowyada iyo sawirrada is-dhexgalka. Fiidiyowyada sidoo kale si toos ah ayaa looga duubi karaa webcam ka dibna waxay ku midoobi karaan mashruuca. Way fududahay in la adeegsado saamaynta muuqaalka iyo animations.
Miisaan fudud oo si sahlan loo isticmaali karo madal.
Tiro badan oo kala guur ah oo leh saameyn muuqaal ah.
Waxay siisaa muuqaal wadaag wadaag ah warbaahinta bulshada.
Shaqeynta xaddidan marka la barbar dhigo aaladaha kale ee suuqa laga heli karo.
Waxa ay taageertaa qaabab file xadidan.
Qeybta 2: Barnaamijka Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah
Kuwa doonaya inay abuuraan bandhig iyagoon soo dejisan wax softiweer ah ama ku rakibin barnaamijyo, waxaan ogaanay ugu yaraan 3 barnaamijyo bilaash ah oo bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad sidaas sameysid.
4. Muuji Slide
Muuji Slide waa barnaamij caan ah oo isku-dhafan oo isku-dhafan oo u oggolaanaya wadaagidda waxyaabaha fudud ee shabakadaha bulshada. Isticmaalayaashu waxay ka soo dejisan karaan fiidiyowyo ama sawirro kombiyuutarrada gurigooda ama waxay si toos ah ugala soo gali karaan warbaahinta qaababka warbaahinta bulshada markii loo baahdo.
Waxay sameyn kartaa waxyaabo badan oo ka baxsan kaliya soo bandhigida bandhigyada fudud.
Waxay leedahay waxyaabo badan oo wadaag bulshada ku saleysan.
Isticmaalayaasha ayaa ka soo dejisan kara faylasha warbaahinta noocyada kala duwan ee warbaahinta bulshada.
Fiidiyowyada waxaa loo dejin karaa mid gaar ah ama mid guud.
Waxay bixisaa fursado badan customizable for kala guurka sawir iyo xawaare.
Ma aha wax aad u fudud in la isticmaalo.
Fiidiyowyada la soo saaray lama soo dejin karo.
FlexClip waa 100% bilaash laakiin wali waxay siisaa noocyo badan oo astaamo dhammaan isticmaaleyaasha. Soo degsi looma baahna, maadaama ay khadka tooska ah uga wada shaqeyso dhammaan wixii la dhisay qalabka horumarinta slideshow. Isticmaalayaasha ayaa ku dari kara fiidiyowyada ama muusikada barxadda faylashana mar dambe ayaa lala wadaagi karaa aaladaha warbaahinta bulshada.
Kizoa waa tifaftire kale oo fiidiyow online ah oo caan ah oo u oggolaanaya helitaanka fududaanta muuqaalada cajiibka ah diiwaangelin la'aan. Tifatiraha horumarsan wuxuu taageeraa animations, kala guurka, iyo saamaynta iyo waxay bixisaa fursado badan oo muusiko ah oo loogu talagalay soo bandhigida fiidiyowyo is-dhexgal ah. Isticmaalayaasha ayaa si fudud u astaysto faahfaahinta waqtiga, mudada, cabirka ama goobta, iwm, haddii loo baahdo.
Qeybta 3: barnaamijyadooda Muqaal bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Android
Dadka raba inay abuuraan Muqaal ku saabsan casriga casriga ah ee 'Android', waxay soo dejisan karaan barnaamijyadan soosaaraha slideshow bilaashka ah ee soo socda.
1. Sheeko Sawir ah
Sheeko Sawir ah horumarin kara bandhigyo waaweyn iyo filim si fudud sedex talaabo ah. Users kaliya waxay u baahan yihiin inay ka xushaan sawiro aaladooda, abuuraan Muqaal ku saabsan kala guurka iyo mawduucyada la doonayo, ugu dambayntiina waxay badbaadiyaan ama wadaagaan hadba sida ay u dhadhamiyaan.
Waxaa jira miirayaal badan, animations iyo subtitles.
Waxay bixisaa natiijooyin xallin sare ah.
Xawaaraha loo maqli karo ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo baahida isticmaaleyaasha.
Kaliya tiro kooban oo sawir ah ayaa la dooran karaa.
2. PIXGRAM - Muqaal sawir duuba
Pixgram waa qalab raaxo leh, fudud oo fantastik ah oo si fudud u soo ururin kara dhammaan sawirada si wadajir ah si ay u sameeyaan slideshow leh saameyn asal ah oo cajiib ah. Waxaa jira astaamo badan oo la beddeli karo oo loogu talagalay hagaajinta saameynta dhadhankaaga.
Wadaagida fudud on dhufto ee warbaahinta bulshada.
Si fudud loo isticmaalo sifooyin badan.
Lagu heli karo bilaash
Waxay bixisaa sifooyinka tafatirka aasaasiga ah iyo saamaynta.
FilmoraGO waa codsi moobiil ah oo bixiya khibrad adeegsi oo aad u habeyn leh oo leh interface si fudud loo isticmaali karo. Way fududahay in la jaro fiidiyowyada sidoo kale waxaad ku codsan kartaa miirayaal kala duwan waxyaabaha ku jira mawduucyo badan oo diyaar ah. FilmoraGo waxay feejignaan gaar ah ka heshay bulshada isticmaaleyaasheeda sababo laxiriira xirfadeed iyo qalab horumarineed.
Waxay bixisaa mawduucyo badan oo la soo ururiyey.
Waxay leedahay saameyn badan oo qabow sida dib u dhaca, dhaqdhaqaaqa gaabiska iyo dhaqdhaqaaqa degdegga ah, iwm.
Mararka qaar si gaabis ah ayey ula socotaa faylal waaweyn.
Qeybta 4: Best Muqaal Muqaal Bilaash ah oo Bilaash ah oo loogu talagalay macruufka
Marka laga soo tago adeegsiga Apple iMovie si aad ugu sameysatid filim duubey iPhone-kaaga, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa barnaamijyadan soo socda ee bilaashka ah si aad ugu abuurto duubey aaladaha iOS.
Kuwa u baahan barnaamij si ay u abuuraan bandhigyo leh sifooyin hodan ah oo dareen leh oo ku saabsan iPhone-kooda ayaa heli doona Shaybaarka Iskuduwaha dalab aad u xiiso badan. Waa wax aad u fudud in la farsameeyo sawirrada, muusikada iyo fiidiyowyada iyadoo la adeegsanayo qalabkan. Dheeraad ah, Muqaal duufaan ah oo dherer kasta waxaa lagu horumarin karaa si fudud.
SlideLab waa aalad horumarsan, awood leh oo xiiso leh oo loogu talagalay soo saarida duubey loo isticmaali karo baahiyaha xirfadeed iyo shaqsiyeed.
Codsi fiican oo fudud.
Way fududahay in lagu daro saameyn xiiso leh.
Way yara adag tahay in la abaabulo sawirrada sidii loogu baahdo.
Codsigani wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay isku daraan sawirrada looxyada, oo leh saamiga la beddeli karo, cabbirka iyo midabka, iwm. Waxay u sii socotaa tallaabo dheeraad ah shaandhooyin casri ah si loo abuuro is-duubo is-dhexgal heer sare ah oo lagu horumarin karo si fudud.
PicPlayPost waxay u saamaxdaa isticmaaleyaasha inay doortaan gif-yada, fiidiyowyada iyo sawirrada, iwm.
Waxay bixisaa hawl fudud video dhexgalka bandhigyo.
Si isku xigxig ah oo isku mar loo maqli karo ayaa la abuuri karaa iyadoo ay weheliyaan astaamo badan oo gaar ah.
Waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay ka fekeraan banaanka sanduuqa oo ay la socdaan qabanqaabooyin dhowr fiidiyow ah.
Ma bixiso wax taageero ah oo ku saleysan iCloud wareejinta ama keydinta waxyaabaha u dhexeeya aaladaha kala duwan.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu fiican ee aan kumbuyuutarka ka qaban karno waa inaan abuurno bandhig sawir leh, halkaas oo sawirradu midba midka kale uga daba wareegayaan si joogto ah oo toos ah. Waxaan ku tusnay websaydhada ugu fiican si loo abuuro sawirro sawirro iyo sawirro si aad uga aragtid internetka, iyadoon loo baahnayn in la isticmaalo barnaamijyo. Waa waqtigii aad dooran lahayd midka aad ugu jeceshahay oo aad bilaabi lahayd!
Tags: software slideshow softwarefilmoragorogrogbarnaamijyada bilaashka ahfree slideshow gaaresoftware bilaash ahfreemake video beddelahakizoaMicrosoftapp slideshow mobiledhufto ee online slideshowsawir slideshowsheeko sawirsawirodheel -dheelpixgramslidelabhoos u dhacmuuji slideslideshowbarnaamijyada slideshowdhufto ee slideshowficil videoWondershare DVD slideshow dhisewondershare filmora
DesignCap: Naqshadeynta Naqshadeynta Sawirada Si Deg Deg Ah Ganacsi, Dhacdooyin, Baraha Bulshada iyo Inbadan…
Jun 13, 2021 saacadu markay ahayd 9:03 AM
Sammy waad ku mahadsantahay maqaalkaaga, waxaad tahay qoraa wanaagsan waan jeclahay qoraalkaaga, waxaana adeegsadaa barnaamijka SlideLab kani waa wax cajiib ah, sidoo kale waxaan adeegsanayaa Vimory app si aan u abuuro muuqaalo muuqaal ah (https://apps.apple.com/us/app/vimory-photo-video-maker/id1359573092). Barnaamijkan waa fududahay in la isticmaalo, UI / UX weyn oo leh waxyaabo badan.